Disponible la actualización para el Htc Hero | Androidsis
antocara | | HTC က, NOTICIAS, ရွမ်
၏တရားဝင်စာမျက်နှာကနေ စပိန် HTC သငျသညျယခုဆိပ်ကမ်းများအတွက် update ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် HTC သူရဲကောင်း အော်ပရေတာအော်ပရေတာကနေ အခမဲ့။ la မှဒီ update ကိုအတူ rom 2.73.405.5 အဆိုပါ interface ကိုထပ်မံဖြစ်ပါတယ် HTC Sense ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေ။ ထို့အပြင်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောကင်မရာ၏အာရုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရန်အကြံပြုသည် ဒီမှာ။ ၎င်းကို Windows XP Sp2 (သို့) Windows Vista တပ်ဆင်ထားသည့်ကွန်ပျူတာမှသာ update လုပ်နိုင်သည်။ သင့်ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားရမည် HTC Sync ကွန်ပျူတာထဲမှာ။ ဖုန်းကိုကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းကိုမှတ်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်က download လုပ်ထားသော Rom ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏တပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်။ ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် PC hibernate mode ပိတ်ထားခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။
ဗွီဒီယိုတွင် install လုပ်ထားပြီးဖြစ်သော update နှင့်အတူ Htc hero terminal ကိုတွေ့နိုင်သည်။
UPDATED - တရားဝင် Htc စာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့ရသော rom သည်အခမဲ့ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သည်။ Orange အော်ပရေတာကသူမကိုယ်တိုင် update ကိုစတင်ရန်ရှိသည်
UPDATE 20/09/09: ယခု ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ download ရယူနိုင်ပါပြီ HTC ဗြိတိန် ဒေါင်းလုပ် HTC သူရဲကောင်း လိမ္မော်သီး ကြောင်းတိုင်းပြည်ကနေ။ စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC သူရဲကောင်းလိမ္မော်ရောင် ပြုတ်ကျနေသည်
UPDATE 01/10/09: ယခုစပိန်နိုင်ငံရှိ Htc Hero Orange အတွက်ရနိုင်သည် ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » ယခုအချိန်တွင် HTC HERO ရရှိနိုင်ပါသည်
ကောင်းပြီ၊ Rom ကိုဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုပါ။
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သင် download လုပ်ချင်သော software သည်သင်၏ device model အတွက်မရပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ HTC Hero xD ရှိတယ်
Luis Gil ဟုသူကပြောသည်
ငါနှင့်ငါသည်လည်းလိမ္မော်ရောင်သူရဲကောင်းတစ် ဦး လည်းမရှိ။ : PP
ResponderaLuis Gil
နောက်တစ်ခုကသူသည်ကျွန်ုပ်၏ HTC ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်၏သူရဲကောင်းကိုသူ၏နံပါတ်စဉ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည်ကိုကြည့်ပါ။ ယခုသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ROM ကိုတစ်နေရာရာမှာဆွဲထားဖို့ကြင်နာမှုရှိမရှိကြည့်ရအောင်ဒါဆို download လုပ်ပြီး update လုပ်လို့ရမယ်။
Responderaimolinos
သူကသင်၏ဓါတ်ပုံများ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့် / သို့မဟုတ်တေးဂီတများကိုသူဖျက်ပစ်သလားသိလား။
ရှည်လျားသောအဖြေ: နောက်ဆုံးသတင်းကသင်၏ Hero ကို format လုပ်ပြီး Android အသစ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Windows / Linux အသစ်တစ်ခုကို install လုပ်ဖို့ PC ကို format လုပ်တဲ့အချိန်မှာတူတူသွားကြရအောင်
ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သလဲ ဦး ဦး
ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာ၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုအခြားအရာများအကြားဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဟုထိုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီ update ကို Orange နဲ့လုံခြုံပါသလား။ ၎င်းကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသလား။
တရားဝင်စာမျက်နှာ၏ ROM သည်အခမဲ့သူရဲကောင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
ငါဘာသာရပ်အပေါ်အလွန်တင်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါပြင်ပရှိအဆက်အသွယ်မိတ္တူကူးရန်စျေးကွက်အတွက်လျှောက်လွှာကိုတွေ့ပြီ။ contact2sim ကိုရှာဖွေပါ။
Quise decir «copiar los contactos en la sim», que mi Hero todavía no conocía el nombre de la tarjeta.
Comprobado, descargue la rom con un numero de serio de un terminal libre y instalé en un Hero de Orange, pero al poco de comenzar la instalación se cancela y te dice que no se puede.
Así que tocará esperarala versión orange :S
ResponderaXhaz
La actualización para Oange de UK ya está disponible enla página de Htc UK. Para España está al caer
pues ya tardan un poco no… vaya tela estos de orange!! en españa siempre los ultimos.. que asko
Responderaury
pero los de orange dicen algo al respecto? dicen cuando va ha salir? yo he pasado media tarde peleando con atención al cliente y para variar nadie tenía ni puñetera idea, ni siquiera saben que es Android y ni mucho menos una actualización! es desesperante!
Esto es lo que tienen estas compañías. Movistaraactualizado los dreamacupcake hace unos días y por mucho que preguntaras no te decían nada. Si yo estuviera en la CMT se enteraban todas.
Cuando accedoaAndroid Market se queda esperando en «Condiciones del servicio Android Market. Cargando…» y nunca sale de ahi.
ResponderaIrwyn
Irwyn ,ami me pasa lo mismo. lo has solucionado?
hola buenasatodos, yo tengo un htc hero de orange liberado de imei, me bajo la actualizacion y todo bien pero cuando intento abrirlo el archivo con windows se me desconecta el telefono. gracias un saludo
hola buenasatodos, yo tengo un htc hero de orange liberado de imei, me bajo la actualizacion y todo bien pero cuando intento abrirlo el archivo con windows se me desconecta el telefono. gracias un saludo.aver si alguien me puede ayudar
SPEED FORGE, Android အတွက် 3D GAME